मेयर तामाङको श्वेतालाई चुनौती– माझी बस्तीमै खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न माग मेयर तामाङको श्वेतालाई चुनौती– माझी बस्तीमै खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न माग Canada Nepal
विप्लव सरकारको नेतृत्व लिन तयार (अन्तर्वार्ता)
काठमाडौं । मुलुकको राजनीति सत्ता परिवर्तनको खेलमा अल्झिरहेको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुक सत्ता परिवर्तनको खेलमा अल्झिँदै आएको छ । यसबीचमा दलहरुले दुुई तिहाइ नजिकसहितको बहुमत, बहुमत र अल्पमतको सरकार बनाए ।
तर, कुनै पनि सरकारले आफ्नो पूरा कार्यकाल पूूरा गर्न सकेनन् । ती सरकारहरु सत्ता परिवर्तनको खेलको भड्खालोमा परे । दुई तिहाइ नजिक बहुमत पाएको वर्तनमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पनि दिनगन्ती पनि सुरु भइसकेको छ । ओलीलाई हटाउन र जोगाउन दुवै थरी राजनीतिक शक्ति संघर्षरत छन् ।
तर, यसले मुलुकको समृद्धि र शान्ति अमैनचैयन नगर्ने नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको बुुझाइ छ । विद्यमान राजनीतिक प्रणाली असफल भइसकेकाले मुलुकमा नयाँ राजनीतिक प्रणालीको आवश्यकता रहेको र यसका लागि जनमत संग्रह गर्नुुपर्ने उनले क्यानडानेपालसँग बताए । आकस्मिक रुपमा क्यानडानेपालले संक्षिप्त लिएको अन्तर्वार्तामा उनले विद्यमान राजनीतिक प्रणाली असफल भएकाले अब कस्तो राजनीतिक प्रणाली चाहिने भन्नेबारेमा जनमत वा चुनावबाट जनताको राय लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
गत फागुन २१ गते सरकारसँग तीन बुुँदे सहमति गरेर खुला राजनीतिमा आएको विप्लव नेकपाको माग पूरा गर्ने क्रममा सरकार रहेको जानकारी दिएका महासचिव विप्लवले ओली सरकारमा आफूहरु सहभागी हुने भन्ने हल्ला निराधार रहेको बताए ।
साथै उनले आफू देश (सरकार)को नेतृत्व लिन तयार रहेको बताए । सरकारको नेतृत्व लिएर मुलुकको विकास र समृद्धिको आफ्नो एजेण्डा कार्यान्वयन गराउन नै आफूहरु राजनीतिक संघर्षमा होमिएको उनको भनाइ छ । ‘हामी त देशको नेतृत्व लिन चाहन्छौँ नि, त्यही चाहेर त हामीहरु विद्रोह गरिरहेका छौँ’, महासचिव विप्लवले भने ।
नयाँ खालको सरकार, नयाँ राजनीतिक प्रणाली आवश्यक रहेको जोड दिँदै उनले यसका लागि जनमत संग्रह वा चुनावमा जानुुपर्ने बताए । सत्ता परिवर्तन वा आफ्नो सरकारको आयू लम्ब्याउन हुने निर्वाचनको औचित्य नरहने भन्दै उनले अहिले राजनीतिक वृत्तमा भनिएजस्तो निर्वाचन मुलुकका लागि आवश्यक नरहेको बताए ।
तर, महासचिव विप्लवले आफूहरु पनि जनमतबाट अघि बढ्न चाहेको बताए । ‘हाम्रो सोचाइमा त के छ भने नेपालमा एउटा नयाँ खालको सरकार आवश्यक छ । नेपालमा नयाँ राजनीतिक प्रणाली आवश्यक छ । त्यसको लागि ठिक छ, हामी जान्छौँ चुनावमा । हामीले भनेका पनि छौँ, जनमतमा जाउँ न, कुन व्यवस्था ठिक भन्ने चुुनाव वा जनमत संग्रह होस्, हामी जान तयार छौं ।’
एमसीसी नेपालका लागि आवश्यक नरहेको बताएका उनले यस्ता खालका सम्झौता, सन्धिहरुबारे जनतालाई स्पष्ट जानकरी दिनुपर्ने बताए ।
बैशाख ८, २०७८ बुधवार १२:२६:०२ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं । मुलुकको राजनीतिक नयाँ मोडमा अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिने घोषणा र यसका लागि संसदको अधिवेशन आह्वानसँगै मुलुक नयाँ राजनीतिक मोडमा अघि बढेको हो ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले संसदबाट विश्वासको मत लिन लागेको जानकारी गराए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत नपाए के हुन्छ ? यसपछि ओलीले चाल्ने कदम के होला ? जस्ता प्रश्न अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा उठेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी विपक्षी दलहरुले गरिरहँदा स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुलाई राजनीतिमा अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । पूर्वतयारी र योजनावद्ध रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् । अर्थात विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा चाल्नुपर्ने कदमको तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली छन् ।
आफैंले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सहभागी नभएका प्रधानमन्त्री ओली अन्ततः संसदबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नुलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । दलीय विवादले मौजुदा प्रतिनिधि सभाको औचित्यलाई सकाएको निष्कर्षमा पुुगेर विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओली अन्ततः सोही संसदबाट विश्वासको मत लिने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही वैशाख २७ गतेका लागि संसदको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । सोही अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
संसदमा कसको कस्तो पोजिसन ?
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउने नपाउने भन्ने हेर्न सदनमा दलीय हैसियत हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय हो । तर, माओवादी केन्द्रका चार जना कारबाहीमा परेर सांसदमुक्त भएपछि अहिले प्रतिनिधि सभा २७१ सदस्यीय रहेको संघीय संसदका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।साथै यस संख्यामा चार जना निलम्बनमा परेका सांसदले मत प्रकट गर्ने पाउने छैनन् ।
१७१ सदस्यीय रहेको प्रतिनिधि सभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल एमाले रहेको छ । उसको १२१ सांसद छ । नेपाली कांग्रेसका ६३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३४, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र स्वतन्त्र एक–एक सांसद छन् । साथै कांग्रेस र जसपाका दुई दुुई जना सांसद निलम्बनमा परेकाले ६१ र ३२ सांसदमात्रै मत विभाजनमा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिनका लागि चाहिने बहुमतको संख्या १३६ सांसद हो । तर, एमालेसँग १२१ सांसद रहेकाले उसलाई १५ मत अपुग हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई अरु दलको समर्थन अर्थात विश्वासको मत दिनुपर्ने हुन्छ । ३२ सांसद रहेको जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले मत दिएमा मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउने छन् । सँगै जोखिम आफ्नै एमालेको माधवकुमार समूहको फ्लोर क्रस पनि रहेको प्रधानमन्त्री ओलीका लागि छ ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । अरु पार्टीबाट समर्थन पाउन जति प्रधानमन्त्री ओलीलाई गाह्रो जति, त्यत्ति नै एमालेकै नेपाल समूहबाट पाउन मुस्किल छ । फ्लोर क्रसको सम्भावना नकार्न सकिँदैन । जसको सन्देश कर्णाली प्रदेशबाट नेपाल समूहले दिइसकेको छ । यसलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना अर्थात नेपाल समूहका सांसदसँग स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदमा बहुमत पु¥याउन सकस छ । १२१ सांसद रहेको एमालेमा नेपाल समूहको फ्लोर क्रसको सम्भावनाले झनै प्रधानमन्त्री ओली सकसमा पर्नेछन् । उत्ता विपक्षी कांग्रेस (६१) र माओवादी केन्द्र (४९)को जोड्दा ११० सांसद रहनेछन् । जुन बहुमतका लागि २६ सांसद अपुुग हुनेछ ।
यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिन किन राजी भए भन्ने प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ । मौजुदा प्रतिनिधि सभा विघटनताका देखिनै निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्री ओलीको यात्रालाई अगाडि बढाउने कदमको रुपमा लिइएको छ । यदी प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन नसके नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । जस बेला प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले विपक्षमा पनि बहुमत पुग्न नदिने र अल्पमतको सरकार बनाएर मुलुकलाई चुनावमा लैजाने विकल्पसहित अघि बढेको हुन सक्ने अनुमान छ
विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनेछन् । यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनेछिन् । जसअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
तर, कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिल्ने अवस्था देखिँदैन । जसपामा ओलीलाई समर्थन गर्ने समूह पनि छ । कांग्रेसको ६१, माओवादीको ४९ गरी ११० सांसद छन् । यी दुुईलाई बहुमतका लागि २६ सांसद चाहिन्छ । तर, ३२ सांसद रहेको जसपाको १४ सांसद ओली पक्षधर देखिन्छन् । यी तीन दल मिलेमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन हुन सक्छ ।
कांग्रेस, माओवादी र जसपा नमिलेमा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्छ । यस धारामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार फेरि प्रधानमन्त्री ओली नै प्रधानमन्त्री हुन्छन् । संविधानको धारा ७६(३) अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले संसदीय दलका नेता ओलीलाई ले प्रधानमन्त्री बनाउने छिन् ।
यसपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री बनेको ३० दिनभित्र ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । एकपछि संविधानको धारा ७६ को उपधाराअनुसार सरकार गठन हुने र उसले बहुमत जुटाउन वा विश्वासको मत लिन नसकेपछि अन्ततः मुलुक निर्वाचनमा जाने छ । यही बाटोमा प्रधानमन्त्री ओली अघि बढेका हुन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधार १ देखि ६ का आधारमा सरकार गठन हुन नसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले सोही धाराको उपधारा (७)अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्काे निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा ७६(७)मा मुलुकलाई पु¥याउने र चुनावमा जान प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासको मत लिन खोज्नुको उद्देश्य देखिन्छ ।
बैशाख २०, २०७८ सोमवार १३:३०:५३ बजे : प्रकाशित
नेपालको राजनीतिमा अन्तिम अंक ७ ले इतिहास बनायो, अब वैसाख २७ गते के हुन्छ ?
काठमाडौं । अनुसन्धान र खोजकर्ताहरूले विभिन्न समयका घटनाहरूलाई महत्त्वका साथ हेर्ने गर्दछन् । यसैक्रममा ज्योतिष तथा खगोलशास्त्रीहरुले पनि यस्ता घटनाहरूलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिएका हुन्छन् ।
पृथ्वीमा घट्ने हरेक प्रकारका साना तथा ठूला घटनाहरूको पछाडि खगोलीय अवस्था पनि जोडिएको हुन्छ । विश्वमा हुने हरेक प्रकारका परिवर्तनका पछाडि आकाशीय पिण्डहरूको पनि प्रमुख भूमिका रहने ज्योतिषीहरूले जानकारी गराएका छन् ।
ज्योतिष शास्त्रमा अङ्क विज्ञानको पनि प्रमुख महत्त्व रहिआएको छ। हरेक अङ्कले ग्रहहरूलाई नियममा राख्न मद्दत गरिरहेको हुन्छ । राहु र केतु ग्रहलाई छाडेर बाँकी सातवटा ग्रहहरूको आधारमा ब्रह्माण्डीय संरचना निर्माण भएको हो । सातवटा ग्रहको नामले बारको रचना भएको छ, जुन विश्वका हरेक देशमा यहीँ नियममा दिनचर्या सुचारु हुन्छ।
नेपालमा पछिल्लो पटक २०७७ सालको सुरुवाती समयदेखि नै देशको राजनीतिमा एक प्रकारको तरङ्ग ल्याइदिएको थियो । विक्रम संवत् २००७, २०१७, २०२७, २०३७, २०४७, २०५७, २०६७ र २०७७ मा हरेक प्रकारका घटनाका पछाडि वर्षको अन्त्यमा सात अङ्कसँग जोडिएकाले सर्वत्र चासो देखिएको हो । ज्योतिषमा सात नम्बरलाई शक्तिशाली नम्बरको रूपमा हेरिने गरेको छ ।
सात जना ऋषिहरूको समूहलाई सप्त ऋषि भनेर शक्तिका रूपमा पूजा गरिन्छ । ठूलाठूला नदीहरूको समूह मिसिएर बनेकोलाई सप्त सागरका रूपमा मानेर पूजा गरिनु, बारको हिसाबले पनि अन्तिममा सात बारसम्म मात्रै हुनु आदिले गर्दा पनि खगोल शास्त्रमा सात नम्बरको महत्त्व विशेष रूपमा हेरिने गरेको छ।
वि.सं २००७ सालमा पनि अन्तिममा सात अङ्क आएको छ, २०७७ सालमा पनि व्यापक राजनीति परिवर्तन भयो । विशेष गरी राणाकालीन शासनको अन्त्य भएको घोषणा फागुन सात गते भएपछि राजा त्रिभुवनले देशमा प्रजातन्त्रको घोषणा गरेका थिए । अङ्क सात शुक्र ग्रहले प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले शास्त्रमा शुक्र ग्रहलाई भोग, विलास, यश, आराम, नाट्य कला, चतुर्‍याइँ आदिको प्रतिनिधित्व गर्ने ग्रहको रूपमा शुक्र ग्रहलाई लिने गरिन्छ । जुन राक्षसहरूको गुरुका रूपमा पनि पूजा गर्ने गरिन्छ, यस्तो शक्तिशाली ग्रहले सञ्चालन गर्ने सात अङ्क अन्तिममा आउँदा देशमा कस्ता कस्ता राजनीति परिवर्तन भएका छन् ज्योतिषी विश्लेषण ।
वि.सं २००७ सालमा पनि अन्तिममा सात अङ्क आएको छ, यस सालमा पनि देशमा राजनीति परिवर्तन भएको थियो ।विशेष गरी राणाकालीन शासनको अन्त्य भएको घोषणा फागुन सात गते भएपछि राजा त्रिभुवनले देशमा प्रजातन्त्रको घोषणा गरेका थिए ।
२००७ सालको आन्दोलनलाई नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भनेर पनि भन्ने गरिएको छ । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको नेतृत्वमा नयाँ दिल्लीमा राणा, नेपाली कांग्रेस तथा राजाबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि उक्त आन्दोलन रोकिएको थियो । २००७ साल नेपाली राजनीतिमा ऐतिहासिक रूपमा लिइएको छ ।
यसपछि २०६७ मा काँग्रेसका एक मात्र जीवित संस्थापक पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको निधनको निधन भयो । यसपछि २०७७ साल लागेसँगै राजनीतिमा तरङ्ग पैदा सुरुभएको थियो । एकाएक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर राजनीतिक दल तथा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई वटा अध्यादेश जारी गराएपछि राजनीतिमा तरङ्ग पैदा गराएको हो ।
२०७७ पुस ५ मा पुनः अर्को राजनीति दुर्घटनामा हुन पुग्यो र अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । फेरिपनि २०७८ साल वैसाख २७ गतेको राजनीति तरङ्ग लाई लिएर सर्वत्र चासो भैरहेको छ । उक्त दिनमा पनि अन्तिमा ७ नै आएकाले विशेष रुपमा हेरिएको छ ।
यही वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्तायात्राको टुंगो लाग्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने भएपछि वैशाख २७ गते संसदको अधिवेशन डाकिएको छ । संसदबाट विश्वासको मत लिन नसके प्रधानमन्त्रीबाट ओली पदमुक्त हुनेछन् भने विश्वासको मत लिए आगामी यात्रा अघि बढ्नेछ ।
बैशाख २३, २०७८ बिहिवार १२:४४:५९ बजे : प्रकाशित
# राजनीतिक संकट
# अंक ७
'ओलीलाई मत दिनु भनेको अर्काे बन्दुक हातमा थमाउनु हो'
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाको माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले पार्टी एकताको पक्षमा रहेको भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई छलफलका लागि समय दिएका छन् ।
क्यानडानेपालसँग कुरा गर्दै नेपाल समूहका नेता विरोध खतिवडाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिनुभन्दा राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने निष्कर्षमा आफूहरु पुुगेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने भएकाले यही वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन डाकिएको छ । यस अवधिभर प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई आफूहरुको माग सम्बोधन गरेर सहमतिमा आउन समय दिएको बताए ।
आफूहरु बीच प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिनुुभन्दा बरु सांसद पदबाट राजीनामा दिनु उपयुुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको भन्दै उनले तर, प्रधानमन्त्री ओली सहमतिमा आएमा भने विश्वासको मत दिने जानकारी दिए । गत फागुन २३ गते अघिकै अवस्थामा पार्टीलाई लगिए प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै विश्वासको मत दिने जानकारी दिएका उनले प्रधानमन्त्री सहमतिमा नआए फ्लोर क्रस गर्नु उचित नहुने भएकाले सांसद पदबाटै राजीनामा दिने निचोडमा पुुगेको दोहोर्‍याए ।
‘यथास्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिनु भनेको उनको हातमा अर्काे बन्दुक थमाउनु हो’, नेपाल समूहका सांसद खतिवडाले भने, ‘फ्लोर क्रस गरेर अराजनीतिक चरित्र देखाउनुभन्दा बरु सांसद पदबाटै राजीनामा दिनेछौँ । तर, सहमति आउन अध्यक्षज्यूलाई अहिले समय दिएका हौँ ।’
प्रधानमन्त्री ओली सहमति नआए वैशाख २७ गते बिहानसम्ममा आफूहरुले सांसदबाट राजीनामा दिने उनको चेतावनी छ ।
बैशाख २३, २०७८ बिहिवार १९:५५:०९ बजे : प्रकाशित